Alshabaab oo Muqdisho ka bilaabay weeraro hubeysan oo maalin cad ah – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Alshabaab ayaa tan iyo markii ay Muqdisho ka baxeen dhamaadkii sanadkii 2011 dib u bilaabay iney dagaallo maalin cad dhacaya ku qaadaan fariisimada ciidamada Soomaaliya iyo Amisom.
Todobaadkii la soo dhaafay Alshabaab ayaa Muqdisho ka geystay weerar toos ah oo dhacay xiili maalin ah, inkasoo weeraradaas lagu soo beegay wax yar ka hor salaadda maqrib.
Shalay galab oo jimce aheyd, koox ka tirsan Alshabaab ayaa iyadoo qorraxdu banaanka taagantahay weerar ku qaaday saldhig ciidamada amaanka Soomaaliya ku leeyihiin degmada Deyniile, gaar ahaan xaafadda Ciise Cabdi.
Dagaalka halkaas Alshabaab ku qaadeen ayaa socday ilaa laga gaaro salaadda maqrib, waxaana markaas ciidamada Soomaaliya xaafadaas ka sameeyeen baaritaan lagu qabqabtay dhallinyaro farabadan.
Maalintii talalaadada ee 11-kii bishaan ayaa xilli galab gab ah koox ka tisan Alshabaab weerar ku qaadeen saldhiga ciidamada AMISOM ku leeyihiin dhismaha Warashadda Barafuunka Isgoyska SOS ee magaalada Mqudisho.
Wixii ka horeeyey todobaadkaan Alshabaab awood uma yeelan iney qaadaan weerar toos ah oo maalin cad ah, waxeyna mararka qaar qaadi jireen weeraro habeenkii ah.
Dadka amaanka indha-indheeya ayaa aaminsan in arrintaani ku timid dabacsanaan xagga amaanka ah oo ay sameysay dowladda Soomaaliya, Alshabaabna ay u tahay tijaabo u horseedi karta iney qaadaan weeraro dheeraad ah haddii aan laga hortegin qaabka ay hadda bilaabeen.
Markii dabayaaqadii sanadkii 2006 ciidamada Itoobiya oo taageerayey dowladda C/llaahi Yuusuf soo galeen Muqdisho ayaa bilhii hore la waayey qolooyinka kala duwanaa ee dagaalka kula jiray, waxeyna muddo kadib bilaabeen weeraro habeenkii ah.
Waxaa xigay weeraro la qaadayey ka hor salaadda maqrib, waxaana xigay in weerarada lagu qaado ciidamada Itoobiya iyo kuwa dowladda xilliga salaadda casir, kadibna waxey arrintu isu badeshay in xiili kasta la weeraro saldhigayada ciidamada.